၂ မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ -
ညဖက်တွေမှာ အိပ်မပျော်တဲ့ ပြဿနာဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ လူအများ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရင်းကတော့ စိတ် ဖိစီးမှုတွေ၊ အစားအသောက် ညီမျှမှု မရှိတာတွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်း မွန် တဲ့ တစ် နေ့ တာ ကို ပိုင် ဆိုင် နိုင် ဖို့ အ တွက် ည ဖက် မှာ သေ ချာ အိပ် စက် ဖို့ လို အပ် တာ ကြောင့် စက္ကန့် ၁၂၀ အ တွင်း မှာ ပဲ အိပ် ပျော် သွား စေ နိုင် မယ့် နည်း လမ်း ကောင်းလေး ကို ဖော် ပြ ပေး ချင် ပါ တယ်။
နည်း လမ်း ၁
လျှာ၊ မေးရိုးနှင့် မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ရှိ ကြွက်သားတွေအပါဝင် မျက်နှာရှိ ကြွက်သားတွေ အားလုံးကို အကြောလျှော့ ထားပါ။
နည်း လမ်း ၂
ပု ခုံး တွေ ကို တတ် နိုင် သ မျှ နိမ့် သ ထက် နိမ့် အောင် နှိမ့် ပေး ပြီး လက် နှစ် ဖက် ကို ဘေးတစ် ဖက် တစ် ချက် စီ မှာ ထား ထား ပါ။
နည်း လမ်း ၃
အသက်ရှူထုတ်လိုက်ပြီး ရင်ဘတ်ကို ဖြေလျှော့ လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ခြေထောက်တွေကိုလည်း လွတ်လွတ် လပ်လပ်နေပြီး အကြောတွေ အကုန်လျှော့ ထားပါ။
နည်း လမ်း ၄
အ ထက် ဖော် ပြ ပါ နည်း လမ်း တွေ အ တိုင်း လုပ် ပြီး ရင် နောက် ထပ် လုပ် ဆောင် ရ မယ့် အ ဆင့် က တော့ အောက် ဖော် ပြ ပါ ပုံ စံ လေး ကို မျက် လုံး ထဲ မှာ မြင် ယောင် လိုက် ပါ။
ဒီလိုပုံလေးအတိုင်းပဲ ရေပြင်ထက် လှေကလေးထဲမှာ အိပ်နေသလိုမျိုး စဉ်းစားလိုက်ပြီး သဘာဝသံစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရေလှိုင်းသံလေးကို နားယောင်နေလိုက်ပါ။
၂ မိနဈအတှငျး အိပျပြျောအောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ
ညဖကျတှမှော အိပျမပြျောတဲ့ ပွဿနာဟာ ယနခေ့တျေမှာ လူအမြား ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ကိစ်စတဈခုဖွဈပွီး အကွောငျးအရငျးကတော့ စိတျ ဖိစီးမှုတှေ၊ အစားအသောကျ ညီမြှမှု မရှိတာတှေ၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အခကျအခဲတှကွေောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
ကောငျး မှနျ တဲ့ တဈ နေ့ တာ ကို ပိုငျ ဆိုငျ နိုငျ ဖို့ အ တှကျ ည ဖကျ မှာ သေ ခြာ အိပျ စကျ ဖို့ လို အပျ တာ ကွောငျ့ စက်ကနျ့ ၁၂၀ အ တှငျး မှာ ပဲ အိပျ ပြျော သှား စေ နိုငျ မယျ့ နညျး လမျး ကောငျးလေး ကို ဖျော ပွ ပေး ခငျြ ပါ တယျ။
နညျး လမျး ၁
လြှာ၊ မေးရိုးနှငျ့ မကျြလုံးတဈဝိုကျရှိ ကွှကျသားတှအေပါဝငျ မကျြနှာရှိ ကွှကျသားတှေ အားလုံးကို အကွောလြှော့ ထားပါ။
နညျး လမျး ၂
ပု ခုံး တှေ ကို တတျ နိုငျ သ မြှ နိမျ့ သ ထကျ နိမျ့ အောငျ နှိမျ့ ပေး ပွီး လကျ နှဈ ဖကျ ကို ဘေးတဈ ဖကျ တဈ ခကျြ စီ မှာ ထား ထား ပါ။
နညျး လမျး ၃
အသကျရှူထုတျလိုကျပွီး ရငျဘတျကို ဖွလြှေော့ လိုကျပါ။ ပွီးလြှငျ ခွထေောကျတှကေိုလညျး လှတျလှတျ လပျလပျနပွေီး အကွောတှေ အကုနျလြှော့ ထားပါ။
နညျး လမျး ၄
အ ထကျ ဖျော ပွ ပါ နညျး လမျး တှေ အ တိုငျး လုပျ ပွီး ရငျ နောကျ ထပျ လုပျ ဆောငျ ရ မယျ့ အ ဆငျ့ က တော့ အောကျ ဖျော ပွ ပါ ပုံ စံ လေး ကို မကျြ လုံး ထဲ မှာ မွငျ ယောငျ လိုကျ ပါ။
ဒီလိုပုံလေးအတိုငျးပဲ ရပွေငျထကျ လှကေလေးထဲမှာ အိပျနသေလိုမြိုး စဉျးစားလိုကျပွီး သဘာဝသံစဉျတဈခုဖွဈတဲ့ ရလှေိုငျးသံလေးကို နားယောငျနလေိုကျပါ။
သင့်ဘ၀မှာ ဒီလူ (၆) မျိုးကို လက်မလွတ်ပဲ တစ်သက်လုံး ပေါင်းပါ….
[Zawgyi] သင့်ဘ၀မှာ ဒီလူ (၆) မျိုးကို လက်မလွတ်ပဲ တစ်သက်လုံး ပေါင်းပါ…. ဒီလူ (၆) မျိုးကို လက်မလွတ်ပဲ တစ်သက်လုံးပေါင်း ပါ လို့ JackMa ကပြော ပါ တယ် ။ ၁ – သင့်ကိုငွေချေးပေးသူ ငွေတစ်ကျပ်တစ်ပြားတိုင်းဟာ သွေးနဲ့ရင်း ခဲ့ရတာပါ။ တန်ဘိုးထားပါ။ ၂ – ပစ္စည်းရက်ရက်ရောရောပေး တတ်သူ ပစ္စည်းပေါလွန်းလို့မဟုတ်ဖူး ပေးကမ်းစွန့် ကျဲတတ်လို့ပါ။ ၃ – အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ သင့်ကို ဦးစားပေးသူ အလို့မဟုတ်ဖူး မျှဝေခံစားတတ်လို့ပါ။ ၄ – အတူအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ပိုလုပ် တတ်သူ နုံအလို့မဟုတ်ဖူး တာဝန်သိတတ်သူမို့ပါ။ ၅ – …
ကိုယ့်ကြောင့် တစ်မိသားစုလုံး စိတ်ဝမ်းမကွဲစေနဲ့။ အပြစ်ကြီးတယ်
[Zawgyi] ကိုယ့်ကြောင့် တစ်မိသားစုလုံး စိတ်ဝမ်းမကွဲစေနဲ့။ အပြစ်ကြီးတယ် “လူတွေကို ညီညွတ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ ဖြစ်ပါစေ”လို့ ကိုယ့်ကိုယ် သံန္နိဋ္ဌာန်ပြုပါ။ အဲ့ဒီလို လောကကြီးကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ ဖြစ်ပါစေ။နေရာတိုင်းမှာ ကြောက်စိတ်တွေ ပြန့်အောင်လုပ်ပြီးတော့၊ပွားအောင် လုပ်ပြီးတော့လူတိုင်းကို ကြောက်စိတ်နဲ့ လွှမ်းမိုးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ပါစေနဲ့။“ကြည့်စမ်း ဟိုလူက နင့်ကို အဲ့လိုပြောတယ်”ဆိုရင်ဒီဘက်ကလူ ကြောက်စိတ်ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီ ကြောက်စိတ်ကနေ မနာလိုတဲ့စိတ်၊အဲ့ဒီလို ပုံစံမျိုးနဲ့ စိတ်ဝမ်းတွေကွဲကြတယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်တဲ့သူ မဖြစ်အောင် သတိထားကြပါ။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က ရန်ဖြစ်တဲ့ ရဟန်း နှစ်အုပ်စုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး နောက်ပိုင်းကျတော့ ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ ဒကာတွေ၊ နတ်တွေကပါစိတ်ဝမ်းကွဲသွားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သတိထားကြပါ။သဘောထားကွဲပြားနေတဲ့ ရဟန်းတော်နှစ်ဖွဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားက ဆုံးမလို့ မနိုင်တဲ့အခါကျတော့တောထဲကို ကြွသွားပြီးတော့ ပါလေယတောထဲမှာဝါတွင်းသုံးလ …
ဖောက်ပြန်ထားသောသူများ၊ သစ္စာမရှိသူများ ဘုရားပေါ်သို့ တက်လာလျှင် ချက်ချင်းမိုးတွေမှောင်လာပြီး မိုးကြိုးတွေပစ်ချတယ်ဆိုတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရား
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ဖောက်ပြန်ထားသောသူများ၊ သစ္စာမရှိသူများ ဘုရားပေါ်သို့ တက်လာလျှင် ချက်ချင်းမိုးတွေမှောင်လာပြီး မိုးကြိုးတွေပစ်ချတယ်ဆိုတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရား သစ္စာမရှိ ဖောက်ပြန်ထားသောသူများ ဘုရားပေါ်သို့ တက်လာလျှင် ချက်ချင်းမိုးတွေမှောင်လာပြီး မိုးကြိုးတွေပစ်ချတယ်ဆိုတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရား ပရိသတ်ကြီးရေ “ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလည်းမလွယ်နဲ့” ဆိုတာ ကြားဖူးမှာပါနော်…ဒီစကားအလကားထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသ သွားသွား သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ အယူ စည်းကမ်းတွေကို ဖောက်ဖျက်လို့မရပါဘူး။ ဖာက်ဖျက်ရင် အန္တရာယ်တစ်ခုခုနဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ် ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မုလအိဘုရားရဲ့ ထူးခြားဆန်းကြယ်ပုံတွေကို လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ခုလို ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ “မုလအိ ဘုရားရှိ ရာတောင်ပေါ်ကအဆင်းမှာ ကားဘရိတ် ပေါက်ပြီးသေဆုံးတဲ့ နာရေးသတင်းကြား ရလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သေဆုံးသူ အကြောင်းလည်းသေချာ …
This Year : 274302
Total Users : 569435
Total views : 2622495